गणेश भगवानले सबैको मनो’कांक्षा पुरा गरुन, आज असार २२ गते मंगलबार तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस रा’शिफल,,, - Onlinenews Global
गणेश भगवानले सबैको मनो’कांक्षा पुरा गरुन, आज असार २२ गते मंगलबार तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस रा’शिफल,,,
July 6, 2021 laxmiLeaveaComment on गणेश भगवानले सबैको मनो’कांक्षा पुरा गरुन, आज असार २२ गते मंगलबार तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस रा’शिफल,,,
आजको राशिफल बि.सं. २०७८ साल असार २२ गते मंगलबार ई.सं.२०२१ जुलाइ ६ नेपाल सम्बत ११४१ बछलागा द्धदाशी, राक्षस नामक संवत्सर, सूर्य उत्तरायन, ग्रिष्म ऋतु, जेष्ठ शुक्ल पक्ष द्धदाशी तिथी, चन्द्रमा वृष राशिमा, कृत्तिका नक्षत्र, शूल योग, कौलब करण । नेपालमा सूर्योदय बिहान ५: १३ बजे, सूर्यास्त साँझ ७: ३ बजे हुनेछ ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
आज जन्म लिने बच्चाको वृष राशि हुनेछ । आज महत्वपूर्ण कार्यका लागि बाहिर निसकनु पर्दा सखर वा गँुड खाएर जुनसकै दिशाको यात्रा गरेपनि शुभ फल प्राप्त हुनेछ । आज कुनै महत्वपूर्ण कार्यको शुरुवात वा शुभ यात्रामा निस्कन आजका लागि शुभ समय बिहान १० बजेर २४ मिनेट देखि १२ बजेर ८ मिनेट सम्म छ । यो समय नेपालको राष्ट्रिय समयमा आधारित समय हो । ठाउँ अनुसार समय, तिथि, नक्षत्र, ईत्यादीमा पनि अन्तर हुनेछ ।
हठ गर्ने बानीले दुःख पाइएला । तर धैर्यताका साथमा प्रयत्न गर्दा मनग्ये फाइदा उठाउन सकिने दिन पनि हो । मनमा आलस्य र अल्छीपनको निवास हुनाले अवसरले पछ्याउँदा पनि तिनलाई उपयोग गर्न सकिंदैन । प्रेम र मित्रताका लागि उचित भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नाले तीतोपन बढ्ने सम्भावना छ । मनपर्ने भौतिक साधन जोड्न मन लालायित हुनेछ ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
परोपकार र धार्मिक क्षेत्रमा लगानी गरेमा राम्रो हुनेछ । चिताएको काममा सफलता पाउनु हुनेछ । रोकिएका काम सम्पादन हुनेछन । घरायसी सुखको अनुभूति हुनेछ । साथीभाइसित भेटघाट हुनुका साथै मनोरञ्जनात्मक काममा संलग्न भइने छ । दाजुभाइ र दिदीबहिनीले दिएको सुझावलाई पालना गर्दा लाभ प्राप्त हुनसक्छ ।
लगनशील भएमा मात्र सोचेको उपलब्धि प्राप्त हुनसक्छ । प्रयत्न गरेका काम बिस्तारै भए पनि सम्पादन हुनेछन। पशुपालन तथा कृषि क्षेत्रबाट सामान्य लाभ मिल्नेछ । बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा धेरै आशावादी हुनु हुँदैन । प्रतिष्ठित काम सम्पादन गर्ने मौका छ, तर जस पाउन गाह्रो छ । सन्ततिका समस्यामा ध्यान केन्द्रित हुनसक्छ ।
अशुभ चन्द्रमाको प्रभाव छ, काम बिग्रने डरले सताइरहनेछ । बेसुरमा वचन दिने बानीले दुःख पाइने छ । नजिकका साथीभाइ टाढिन सक्छन । महत्वाकाङ्क्षी योजना गोप्य राख्नुहोला । यद्यपि कृषि तथा पशुबाट लाभ हुने समय छ । बिग्रिएको सम्बन्ध र पहिलेका कमजोरीलाई सुधार गर्न सकिने छ । चिन्तन तथा एकान्तमा मन रमाउनेछ ।
दाजुभाइ र बन्धुबान्धवको काममा सहयोग लिन÷दिन सकिने दिन छ । उद्योग तथा बन्दव्यापारमा प्रशस्त फाइदा मिल्ने समय छ । कमाएको धन सञ्चित हुनेछ वा पारमार्थिक काममा लगानी गरिने छ । पुरानो समस्यालाई निराकरण गर्ने उपाय सुझ्ने छ । घरायसी र दाम्पत्य सम्बन्ध अनुकूल रहने छ । कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा राम्रो मुनाफा आर्जन गर्न सकिने छ । ***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
महावीर श्री हनुमानको नाम मात्र सम्झनाले पनि हुनेछन् जीबनका सबै समस्या टाढा
बधाई छ !!! रमेश प्रसाईको जिन्दगीमा छोराको आगमन (सक्दो शेयर गर्नुहोस)
पाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
July 19, 2021 laxmi
जीवनसाथीका लागि धेरै नै भाग्यशाली हुन्छन् यी राशि हुनेहरु, हुन्छन् बुद्धिमानी
सुत्नुभन्दा अगाडी जानकी मन्दिरको दर्शन गर्नुहोस्, भेटी स्वरुप १ सेयर गरौं!